Warar - Fahamka caaryada mindi: sameynta iyo isbarbar dhigga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mindi kala duwan ayaa dhinta
Sheet xumbo Poron
Hot bireed jediyay dhinta
Fahamka caaryada mindi: sameynta iyo isbarbar dhigga faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka mindi kaladuwan ayaa dhinta
Fahmitaanka caaryada qalabka
Waxaa jira in ka badan 100 nooc oo mindiyo ah marka loo eego xagasha daab, adkaanta daab iyo daab, hadhuudhka daabka iyo farsamada wax soo saarka dusha sare ee daab iyo daab.
Horumarinta iyo soosaarida caaryada qalabka waxay ku saleysan tahay fahamka qoto dheer ee macaamiisha dalabkeeda macluumaadka iyo walxaha. Macluumaadka ay macaamiisha rabaan inay muujiyaan waxaa lagu soo bandhigayaa sawirka naqshadeynta, sidaa darteed waa inaan marka hore dib u eegno sawirada, u bedelnaa shuruudaha macaamilka hab socodkooda iyo soo bandhigida sheyga ugu dambeeya.
Naqshadeynta habka wax soo saar waxay u baahan tahay injineerada inay yeeshaan faham aad u badan oo ku saabsan qalabka. Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah in si wanaagsan looga fahmo waxqabadka mashiinnada shirkadeena. Waxaa la dhihi karaa fahamka qalabka iyo fahamka wax soo saarka mashiinada waa xirfadaha aasaasiga ah ee injineerada ay tahay inay lahaadaan.
Ogow waxa ay macaamiishu rabaan, ogow astaamaha agabyada, la jaan qaada wax soo saarka mashiinadeena, oo maskaxda ku haaya goobta wax soo saarka. Sidee loo xaliyaa dhibaatooyinka? Xalku waa habka farsamada aad naqshadeeysid, iyo qaabka qalabku waa aalad muhiim ah oo waxa aad u maleyneyso u rogaa run. Ma lagu guuleysan karaa
Mold Caaryada mindi ee leysarka
Tilmaamidda qoto dheer ee shaashadda mindi waxaa lagu fuliyaa iyadoo la adeegsanayo tamarta xoogga leh ee leysarka, si loo gaaro ujeeddada rakibidda magaabay.
Waa maxay caaryada QDC?
Dhimashada QDC waxay qaadataa qaabka isku darka moduleka, waxay isticmaashaa mindida wax xardho ama mindida daxalka u dhintaa si loogu rakibo salka dhinta qalabka feer iyo nadiifinta; maxaa yeelay dhimashadu si dhakhso ah ayaa loogu beddeli karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha kala-goynta dhimashada ee kala duwan, iyadoo la tixgelinayo faa'iidooyinka aaladda dhimashadeeda iyo saxnaanta iyo xasilloonida dhimashada.
Isbarbar dhigga sawirada dhabta ah ee mindi kaladuwan ayaa dhinta: (Japan, guud ahaan, daaweynta muraayada) qalabka kaladuwan wuxuu ubaahanyahay garbiyo kala duwan si loo gaaro saameynta ugu qaalisan. Waxa kale oo jira caaryada mindi, maaddada, barkin isbuunyo laastik ah oo saddexda ah sidoo kale aad ayey muhiim u yihiin. Qalabka qaar ayaa soo saari doona kala duwanaansho cabbir ka dib dhimista dhimashada. Si loo sameeyo qalab wanaagsan oo dhinta, sidoo kale waxaa lagama maarmaan u ah warshadda caaryada qalabka inay yeelato faham ku saabsan astaamaha maaddada, ka dibna ay dejiso tiknoolojiyadda u dhiganta ee u dhiganta.
Falanqaynta iyo soo saarista caaryada qalabka
Waxaan u soo qaadaneynaa habka wax soo saar ee dhimashadu ay tusaale u tahay si aan u fahamno howsha iyo soo saarista caaryada qalabka
Socodka socodka geeridu waxay u dhintaa
1. Helitaanka amarka
Qeybta qaabilaada ayaa mas'uul ka ah soo dhaweynta e-mailada macaamiisha iyo la xiriirka macaamiisha shuruudaha soo saarida, oraahda iyo waqtiga gaarsiinta. Xaqiijinta macaamilka ka dib, xaashida wax soo saarka caaryada ayaa la furi doonaa oo jaangooynta ayaa la bilaabi doonaa. Ugu dambeyntiina, sawirka waxaa laga sameyn doonaa filim gaar ah oo loogu talagalay daxalka, kaas oo loo gudbin doono waaxda daxalka oo ay weheliso amarka shaqada.
Kadib helitaanka filimka iyo amarka shaqada, waaxda wasakhda waxay xaqiijineysaa dhumucda saxanka, dhererka midida iyo nooca maadada, ka dibna ku dhajineysa filimka, daabacaysaa oo banaanka soo dhigeysaa. Ugu dambeyntiina, nooc ka mid ah caaryada ayaa la muujiyaa ka dib daaweynta dawada dareeraha ah. Haddii shaqada soo-gaadhista aan si fiican loo qaban, waxaa lagama maarmaan ah in la hagaajiyo shaxanka ka hor inta aan la gelin mashiinka daxalka ee daxalka. Ka dib markaad buuxiso shuruudaha, waa la soo saari karaa. Ka dib markaad maydho lacagta keydka, waxaa loo diri karaa waaxda xigta. Waaxda daxalka ayaa ah waax sifeyn ku shaqeyneysa caaryada.
Kadib markay hesho mashiinada qalafsan, waaxda xardhadu waxay galisaa mashiinka si loogu farsameeyo kadib kormeer muuqaal iyo xaqiijin ah. Sababtoo ah farqiga u dhexeeya cabbirka dhinta, dhibaatada iyo dhererka khadka qalabka, waqtiga wax soo saarku wuu ka duwan yahay. Guud ahaan, caaryada qalabku waxay qaadataa 1-4 saacadood, caaryada qalabka gaarka ah waxay u baahan tahay 8 saacadood ama xitaa in ka badan 24 saacadood si ay u dhammaystirto mashiinka CNC. Dhameystirka kormeerka kadib, hogaamiyaha kooxda waxaa loo diri karaa QC kadib markii si horudhac ah loo go'aamiyay inaysan dhibaato jirin.
QC ayaa mas'uul ka ah baaritaanka cabbirka dhinta, aaladda agteeda, iwm, waxayna mas'uul ka tahay sameynta warbixinta kormeerka, ka dibna loo diraa daaweynta kuleylka.
5. sida ku cad maaddada macaamilka loo qaybiyo laba hab oo wax lagu farsameeyo
Haddii maaddadu aysan ku jirin xabag, waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta kuleylka guud. Marka lagu daro daaweynta kuleylka si loo kordhiyo adkaanta, walxaha isku-dhejiska ah waa in sidoo kale lagu dhajiyaa Teflon. Teflon wuxuu ka dhigi karaa badeecada feerka inaanay ku dhegsanayn dhimashada, laakiin nidaamka gaarka ah awgood, dahaadhka Teflon wax saameyn ah kuma yeelanayo fiiqitaanka dhimashada. Ka dib marka warbixinta kormeerka kormeeraha kormeeraha, dhimashadu waa la buuxin karaa oo la rari karaa.
6. daaweynta muraayadda
Daaweyntani waxay ka saari kartaa hadhuudhka yar ee dhinaca mindida geeskeeda dhinta, ku guuleysan kara saamaynta muraayada, oo si wax ku ool ah u xallisa dhibaatada gubashada iyo boodhka markii badeecaddu feedho iyo sawir qaaddo, waxayna ka dhigtaa in badeecadda geeskeedu siman yahay oo siman yahay. Waxay ku habboon tahay feedhka iyo goynta alaabada leh shuruudaha sare. Waqtigan xaadirka ah, shirkadeenu waxay iska leedahay mindi muraayada waxayna iska leedahay soo saaraha gaarka ah ee dhul weynaha Shiinaha.
Waqtiga boostada: Oct-19-2020
Wax badan ka baro annaga iyo warshadaha
Jawaabaha su'aalaha ku saabsan aaladda saxda ah ...
Fahamka caaryada mindi: sameynta iyo ...
Casho sanadle ah
Telefoonka: (0086) 186-8244-3350
Cinwaanka: No. 47, Futang Road, Beesha Tangxiachong, Yanluo Sub-district, Bao'an District, ShenZhen, Guangdong, China
Laser dhinta, Qashinka-Daadinta Soo-saarista Rotary Die, Maaskarada Rotary Die, Muraayadda Dusha sare ee Muraayadda oo Dhinta, Birta xardho steel, Auto-Waxyaabaha Buuxinta xardho dhinto,